ဆာနေကြသူများ – မြန်မာသတင်းစုံ
ပင်တီကိုလည်း တပါတည်းချွတ်ချသည်။ ထို့နောက် သူမပေါင်နှစ်ဖက်ကို ကားနေအောင် ဆွဲကားသည်။ ပြီးလျင် သူမအဖုတ်ကို မိုးဆွေ စိုက်ကြည့်နေသည်။ “လှလိုက်တာ” မိုးဆွေက သူမအဖုတ်ကို ကြည့်ရင်း ပြောတော့ သူမ ရှက်မိသည်။ လက်ဖြင့် အဖုတ်ကို အုပ်မလို့ပင် ဖြစ်သွားသည်။ သို့သော် မိုးဆွေက လက်ဝါးဖြင့် အုပ်ကာ စပွတ်သည်။ ပိုပိုသည် အပျိုစင်ဖြစ်သည်။ ခုမှ အသက် ဆယ့်ငါး နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ မိုးဆွေလည်း လူပျိုဖြစ်သည်။ သူလည်း အသက် ဆယ့်လေး နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ သို့သော်လည်း ယောက်ျားသားပီပီ ဖူးကားများ ကြည့်ဖူးထားသူ ဖြစ်သောကြောင့် ဘယ်လိုစကိုင်ရမည်ကို သိနေခြင်း ဖြစ်သည်။ အဖုတ်ကို အသာပွတ်ပြီး ပိုပိုနို့ကို စို့သည်။ ပိုပိုက မျက်လုံးလေးမှိတ်ရင်း ငြိမ်ခံနေသည်။ မိုးဆွေက ပိုပိုစောက်ဖုတ်၏ ဂျီစပေါ့ကို လက်ခလယ်ဖြင့်ထိသည်။ ပိုပိုက အံလေးအသာကြိတ်သည်။ ပိုပို၏ ဗိုက်ခေါက်များက လှိုင်းတွန့်လေး မသိမသာထထသွားသည်။
ကျွန်တော်နာမည်က အောင်ကျော်သန်းပါ.. အပေါင်းအသင်းတွေကတော့ အောင်ကြီး လို့ခေါကြတာပေါ့…. တက်ဆီ သမားလေးအောင်ကြီးပေါ့ဗျာ…. ကျော်အသက် ၂၅မှာအိမ်ထောင်ကျတဃ်… သူနာ့မည်က ခင်လေးပေါ့.. ဒါနဲ့ကျော်က အားကစားလိုက်စားတော့ ဗလကတောင့်တောင့် လီးက ရှစ်လက်မရှိတာပေါ့ဗျာ… ခင်လေးလေးကတော့ လုံးကြီးပေါက်လှကြီးပေါ့… မင်္ဂလာဦးညမှာ ခင်လေးကိုချစ်ဖို့သူငဃ်ချင်းတွေနဲ့ သောက်ကြစားကြပေါ့ …။ အရက်ရှိန်လေးက နည်းနည်းတက်လာတာ ခင်လေးဆီအပြေးပြန်လာခဲ့တဃ်… ခင်လေးလေးက ညဝတ်အကျီင်္အပါးလေးနဲ့ ရှက်သွေးရောင်ဖြာနေတဲ့ သူ့မျက်နှာလေးက ကျော့်ကိုရင်တွေ တဒုနိးဒုန်းခုန်စေတာပေါ့ဗျာ… ခင်လေးကကို “ကိုအောင်ထမင်းစားဦးမလား” တဲ့… ကျော်ကလည်းခေသူမှမဟုတာ “ထမင်းစားချင်ပူး ဖုတ်ဖုတ်ဘဲ စားချင်တဃ်” ပြောလိုက်တော့ ခင်လေးလေးက “ဟာကျော်ကြီးနော်မညစ်ပတ်နဲ…”။ ကျေိာလည်းထိန်းမရတော့နဲ့ ခင်လေးလေးကိုချီပီး ကုတင်ပေါပစ်ချလိုက်တော့ ခင်လေးလေးခင်ဗျာ မျက်လုံးလေးလည်ပီး ကြည့်နေရှာတဃ် ခင်လေးလက်ကလေးကိုကိုင်ပီး ကျော်လီးပေါကိုတင်ပေးလိုက်တော့… “ဟာကိုအောင်ခင်လေးမြင်ဖူးတာ ကလေးလေးဟာတွေဘဲ မြင်ဖူးတဃ် …ကိုအောင်ဟာကြီးက ကြောက်စရာကြီးနော်” “အဲ့ကြောက်စရာကြီးနဲ့ချစ်ပေးမဃ်” […]
အင်းကျုပ်ဆိုတဲ့ကောင်က အသက်ကြီးလေ ပျက်ဆီးလေလေ ဆိုတဲ့ကောင်ဘဲ ပြောရမယ်ထင်တယ်။ အခုဆိုဘာလိုလိုနဲ့ လေးဆယ့်ငါးတောင်ရောက်ပေါ့။ အခုထိမာန်ကမကျချင်သေးဘူး မာန်ထက် ဝါသနာဆိုရင် ပိုမှန်မလား အခုထိ ချောင်းရတာကို ဝါသနာက အပါသား တခါကလည်း အချောင်းကောင်းပြီးသေတော့မလို့ ထားပါ အဲ့ဒါကနောက်မှပြောမယ်။ အခုလောလောဆယ်ပြောချင်တာက လတ်လတ်ဆတ်ဆတ် မနေ့ကဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကိစ္စ ကျုပ်ကမီးပြင်တဲ့သူ အဲ့ဒီတော့ အိမ်တကာဝင်ထွက်ခွင့် ပါမစ်ရှိတယ်ဘဲ ပြောရမှာပေါ့။ ကျုပ်နဲ့တအားရင်းနှီးတဲ့ သူငယ်ချင်းတယောက်ရှိတယ်။ သူ့မိန်းမနဲ့ခလေးတယောက် အပြင် တခြားခေါ်တင်ထားတဲ့ ဦလေးတယေက်ရှိတယ်။ နေတာကသုံးထပ်ခွဲတိုက်တန်း သူငယ်ချင်းအခန်းက အလယ်တည့်တည့်က တိုက်ခန်းကငါးခန်းတွဲ အလယ်သုံးခန်းက အောက်ခြေရော အပေါ်လေဟာပြင်ချင်း ဆက်နေတယ်။ ဒီတော့ သူငယ်ချင်းအိမ်ကို သွားပါများတော့ ဘေးတဖက်တချက်မှာရှိတဲ့ အိမ်နီးချင်းတွေနဲ့ မျက်မှန်းတန်း ရင်းနှီးမိတယ် ဆိုပါတော့။ ဘယ်ဖက်ဘေးကအိမ်မှာက အိမ်စောင့်တဲ့ သူတယောက်လွှဲပြီး သူဋ္ဌေးတွေကတလနှစ်လလောက်နေမှတခါလာတာ။ ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ […]